အကြံပိုင်တဲ့ ဖိုးတုတ် – Grab Love Story
ကိုင်တော့မကိုင်ကြည့်ဖူးပါ။ ဒါပေမဲ့ မစန်းကြည်၏ ကားကားစွင့်စွင့် ရှိလှသော တင်ပါးကြီးတွေက မာတင်းပြီး နေမည်ဆိုသည်ကိုကား ဖိုးတုတ် တစ်ယောက် ကောင်းကောင်းကြီး သိနေသည်။ တနေ့တနေ့ ဒီတင်ပါးကြီးတွေကို ခိုးခိုးကြည့်ပြီး လူပျိုသိုး ဖိုးတုတ်လီးတောင်ခဲ့ရတာ မနည်းပေ။ ကလေးတစ်ယောက် အမေဆိုပေမဲ့ မစန်းကြည်က တသားမွေး တသွေးလှသည်။ အသားကလည်း ဖြူတော့ လုံးကြီးပေါက်လှ ခန္ဓာကိုယ်နှင့် အတော်ကြည့်ကောင်းလှသည်။ ကြည့်ကောင်းသည်ဆိုပြီး ဖိုးတုတ်ဗြောင်ကျကျ မကြည့်ရဲပေ။ ဖိုးတုတ်တို့သားအမိကို မစန်းကြည်တို့ လင်မယားက အများကြီး ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက် ထားတာ ဖြစ်သည်။ ဖိုးတုတ်တို့ လက်ပံရွာမှာက မစန်းကြည်တို့ လင်မယား… အဲ… သူ့လင်ဘအေးနှင့် မစန်းကြည်တို့က ရွာ မျက်နှာဖုံးတွေ။ စီးပွါးရေး ပြေလည်သည်။ အိမ်ခြေတရာ မကျော်သော သူတို့ရွာလေးတွင် လယ်ယာ၊ခြံ၊ကျွဲနှင့်နွား တို့ဖြင့် အဆင်ပြေသူများ ဖြစ်ကြသည်။ သုံးဧကလောက်ရှိသော ခြံကြီးရှိပြီး သည်ခြံထဲမှာပင် ဘအေးနှင့် မစန်းကြည် တို့က ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး အိမ်ကြီးဆောက်၍ နေရုံမျှမက ခြံထောင့်တနေရာတွင်လည်း ဖိုးတုတ်တို့ သားအမိအတွက် အခိုင်အခန့် ဓနိမိုးတဲလေးဆောက်၍ ပေးထားသေးသည်။
ဒီလိုဆိုတော့ ဖိုးတုတ် မစန်းကြည်ကို ရဲရဲမကြည့်ဝံ့သည်မှာ မဆန်းပေ။ ဖိုးတုတ်အခုအသက် ၂၅နှစ်ရှိပြီ။ ဖိုးတုတ် ၁၄ နှစ်သားတွင်သူ့အဖေဆုံးပြီး သူ့အမေ မုဆိုးမဖြစ်သည်။ ရွာတွင် ဖိုးတုတ်လယ်သူရင်းငှားဘဝဖြင့် ဝမ်းရေး ကြောင်းနေခဲ့ရပြီး ဖိုးတုတ် သူရင်းငှားလုပ်ရသည့် လယ်ကလည်း မစန်းကြည်၏ မိဘများလယ်တွင် ဖြစ်သည်။ ဖိုးတုတ် အသက် ၁၈ နှစ်လောက်တွင် ဘအေးနှင့် မစန်းကြည်ညားခဲ့ပြီး သူတို့ လင်မယား ကောင်းမှုကြောင့် နေစရာ တဲလေးရခဲ့ရုံမျှမက ကိုဘအေးက သူတို့သားအမိအတွက် ဝမ်းစာစပါးထည့်ပေးထားပြီး တနှစ်ပတ်လုံး လယ်အလုပ်၊ ခြံအလုပ်ဖြင့် အလုပ်မပြတ်အောင် ပေးထားလေတော့ ဖိုးတုတ်တို့သားအမိ အတော်လေး ချောင်ချောင်လည်လည် နေနိုင်လာခဲ့ပေသည်။ လူပျိုပေါက်အရွယ်ထဲက မစန်းကြည်နှင့် လက်ပွန်းတနှီးနေခဲ့ရသော ဖိုးတုတ် တယောက် လူကနေပေမဲ့ လီးကမနေပေ။ မစန်းကြည်ကိုမြင်၍ လီးတောင်ခဲ့ရသော အကြိမ်အရေအတွက်က မနဲတော့ပေ။ အချိန်ကာလ ကလည်း နှစ်ရှည်လများ ကြာလာခဲ့ရပြီ ဖြစ်သည်။ မစန်းကြည်ကို ချောင်းချောင်းကြည့်၍ ဂွင်းတိုက်ခဲ့တာလဲ များလှပေပြီ။ မြင်ဖန် တွေ့ဖန်များလျှင် ရိုးသည်ဆိုသော စကားက ဖိုးတုတ်အတွက်တော့ မမှန်ပေ။ မြင်ဖန်တွေ့ဖန်များလာတော့ ဖိုးတုတ် မစန်းကြည်ကို လိုးချင်စိတ်က ပို၍ပင် သည်းထန်လာခဲ့ရပေသည်။ ဘယ်တော့မှ အဖြေထွက်လိမ့်မည် မဟုတ်သော မေးခွန်းကိုလည်း ဖိုးတုတ် ခဏခဏမေးနေမိသည်။
ဒါကတော့ “..မစန်းကြည်ကို ဘယ်လိုရအောင် လိုးမလဲ”.. ဆိုတာပင် ဖြစ်သည်။ ဖိုးတုတ်တွင် ကောင်းသည်လို့ပဲ ပြောရမလား… မကောင်းဘူးဟုပင် ပြောရမလား မသိသည့် ညင်တခုရှိသည်။ မသွားနဲ့ဆိုလျှင် သွားသည်။ မလုပ်ပါနဲ့ ဆိုလျှင် ရအောင်လုပ်တတ်သည့် ဖိုးတုတ်၏ ‘ညင်’ပင် ဖြစ်လေသည်။ ဖိုးတုတ်၏ သည်ညင်ကြောင့်ဘဲ ဒီဇာတ်လမ်းလေးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရသည် ဆိုပါစို့….. “ ဖိုးတုတ်ရေ….. ဖိုးတုတ်… ခဏလာအုံး….. ” “ လာပြီ….. အမ… ရေ…. ” အိမ်ရှေ့ဖက်မှ ခေါ်သံကြောင့် အိမ်နောက်ဖေး နွားတင်းကုပ်ထဲတွင် နွားစာစင်းနေသော ဖိုးတုတ် အိမ်ဘက် သို့ ပြေးထွက်လာခဲ့သည်။ ဖိုးတုတ် အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ အိမ်ပေါက်ဝတွင်နေသော မစန်းကြည်ကို အဆင်သင့်တွေ့လိုက်ရသည်။ “ အမ…..ဘာခိုင်းမလို့လဲ….. ” “ အော်…..နင့်ကို..ငါမှာထားမလို့…..နင် ညနေကျ အဖွားလေးတို့တဲက နွားနို့သွားယူရင်….သံချောင်းတို့ တဲဖက်က မသွားနဲ့….အဲဒီဖက်က ပိုဝေးတယ် သိလား…” “ ဟုတ်ကဲ့….အမ…..” “ အေး…..အဲဒါဘဲ…..သွားတော့……” ဖိုးတုတ် မစန်းကြည်ကို ခေါင်းငြိမ့်ပြပြီး အိမ်နောက်ဖက် နွားစာစဉ်းရာသို့ ပြန်လာခဲ့သည်။ အဖွားလေးတို့ တဲမှာ နွားမသားကျသဖြင့် နွားနို့ရသည်။ နေ့တိုင်း နွားနို့ ငှက်ပျောဖူး တပုလင်းကို ဘအေးသောက်ဖို့ ဖိုးတုတ် သွားသွားယူရသည်။
ဖိုးတုတ် သံချောင်းတို့တဲမှ နေ့တိုင်းဖြတ်၍ သွားနေကျ။ ဖိုးတုတ် စဉ်းစားမိသည်က သံချောင်းတို့တဲဖက်မှ သွားလျှင်ပို၍နီးသည်။ ငါ့ကို အမစန်းကြည်က ဘာလို့ပိုဝေးတယ်လို့ ပြောရတာလဲဟု ဖိုးတုတ်စဉ်းစား၍မရ။ သေချာတာကတော့ သူ့ကိုအမစန်းကြည်က သံချောင်းတို့တဲဖက်က မသွားစေချင်တာကတော့ သေချာနေပြီ။ ညနေစောင်းတော့ ဖိုးတုတ် အဖွားလေးတို့တဲတွင် နွားနို့ယူရန် ထွက်လာခဲ့သည်။ သံချောင်းတို့တဲကို လှမ်းမြင်လိုက်ရသောအချိန်တွင် မစန်းကြည်မှာထားတာကို ဖိုးတုတ်သွားပြီး သတိရ လိုက်လေသည်။ မစန်းကြည် ပြောထားသည့်အတိုင်း သံချောင်း၏တဲဖက်မှ မသွားဘဲ ကွင်းထဲကနေပတ်ပြီး သွားရမလားဟု ဖိုးတုတ် စဉ်းစားလိုက်လေသည်။ ဒီမှာတင် သူ့ရဲ့ ညဉ်ကပေါ်လာသည်။ သံချောင်းတို့ တဲရှိရာဖက်သို့ တည့်တည့်မတ်မတ်ပင်လျှောက်လာခဲ့လေသည်။ သံချောင်း၏ တဲမရောက်မှီ ဝါးနှစ်ပြန်လောက်တွင် ပျဉ်ထောင်အိမ်တလုံးလောက် မြင့်သော ကောက်ရိုးပုံကြီး တခုရှိသည်။ ထိုကောက်ရိုးပုံ အနီးသို့အရောက် သံချောင်းခြေလှမ်း တုံ့သွားသည်။ မစန်းကြည် တစ်ယောက် သံချောင်း၏ တဲထဲသို့ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ဝင်သွားတာကို မြင်လိုက်ရ၍ဖြစ်သည်။ ဖိုးတုတ် ကောက်ရိုးပုံကြီးဘေး ပြေးကပ်လိုက်ပြီးကောက်ရိုးပုံကြီးကို ပတ်ကာ အပြေးအလွှားဖြင့် သံချောင်း၏တဲဘေးသို့ ဝင်၍ကပ်လိုက်သည်။မှောင်ရီပျိုးစ အချိန်ဆိုတော့ ဖိုးတုတ်အတွက် တပန်းသာ သွားလေသည်။ တဲဘေးသို့ ကပ်မိလျှင်ကာထား သော ခပ်ကြဲကြဲထရံကြားမှ အထဲသို့ ချောင်းကြည့် လိုက်မိသည်။ ဖိုးတုတ် မျက်လုံးတွေ ပြာဝေသွားသည်။
မစန်းကြည် က သံချောင်း၏ ရင်ခွင်ထဲသို့ ရောက်နေပြီး မစန်းကြည်၏ အင်္ကျီကြယ်သီး များအားသံချောင်းကဖြုတ်ပေးနေသည်။ သံချောင်းဖြုတ်ပေး၍ အင်္ကျီကြယ်သီးများ ပြုတ်အသွား မစန်းကြည်က သူမအင်္ကျီကို သူမဘာသာ ချွတ်လိုက်လေသည်။ အင်္ကျီကျွတ်သွားတော့ အထဲမှ ဘော်လီအင်္ကျီ တထည်တည်းနှင့် မစန်းကြည်၏ ကိုယ်လုံးက ဖြူစင်သန့်ရှင်းနေသည်။ ဘော်လီအင်္ကျီထဲမှ ရုန်းကန်ထွက်မတတ် ဖြစ်နေသော နို့အုံသား ဖွေးဖွေးအိအိကြီးတွေကို စိုက်ကြည့်နေသော သံချောင်း၏ မျက်နှာကို မစန်းကြည် ကြည့်လိုက်သောအကြည့်က ဖိုးတုတ်စိတ်ထဲ မချင့်မရဲကြီး ဖြစ်သွားရလေသည်။ သံချောင်းက မစန်းကြည်၏ ဘော်လီအင်္ကျီကို မချွတ်တော့ဘဲ အပေါ်သို့လှန်တင်ကာ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဆွဲဖော်လိုက်လေသည်။ ကလေးတစ်ယောက်သာ မွေးဖူးသေးသော မစန်းကြည်၏ နို့ကြီးတွေက မို့မောက်ဖေါင်းတင်းပြီး ကော့ချွန်တက်နေလေသည်။ သံချောင်းက နို့အုံတင်းတင်းအိအိကြီးတွေကို လက်ဖဝါးနှင့်အုပ်ကာ ပွတ်သပ်ဆုပ်ချေပေးလိုက်ပြီး ခေါင်းကိုငုံ့၍ တပြွတ်ပြွှတ်နှင့် စို့နေလေတော့သည်။ ဖိုးတုတ်က အနီးလေးမို့ အသံတွေပါ ကြားနေရလေသည်။ မစန်းကြည်က ခေါင်းကြီးကို နောက်လှန်မော့ ထားပြီး မျက်လုံးကိုစုံမှိတ်ကာ ခံနေရှာသည်။
သံချောင်း၏ လက်တဖက်ကလည်း မစန်းကြည်၏ နောက်ကျောကို သိုင်းဖက်ထားသည်။ “ အဟင့်…..အဟင့်…..ယားတယ်……” သံချောင်း ဘယ်လိုလုပ်လိုက်သည်မသိ။ မစန်းကြည်၏ ခါးကြီးကော့၍ တွန့်လိမ်ကာ ပြောလိုက်လေသည်။ “ ဟို….တနေ့ညက လုပ်ရတာအားမရဘူးကွာ…..ဒီနေ့တော့ အားရအောင် လုပ်တော့မယ်နော်…..” နို့စို့တာ အားရသွားသည်ထင်၏။ ခေတ္တရပ်လိုက်ပြီး မစန်းကြည်ကို သူ့ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲပွေ့ကာ ပြောလိုက်သည်။ မစန်းကြည်၏ လက်တဖက်ကလည်း သံချောင်း၏ခါးကို သိုင်းဖက်ထားလေသည်။ “ အဲဒီညက….ဟိုအကောင်…..သေချင်းဆိုး…..နိုးလာလို့ပေါ့…..” မစန်းကြည် လင်ငယ်ကျေနပ်အောင်ဘဲ ပြောတာလား တကယ်စိတ်ပါ၍ ပြောသလားတော့မသိ။ ကိုဘအေး ကို ဒီလိုပြောသည့်အတွက် ဖိုးတုတ် ဒေါသထောင်းကနဲ ထွက်သွားသည်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ဒေါသကို တခဏအတွင်း ကာမစိတ်က အနိုင်ယူသွားသည်။ ဒီလိုလိုးတာကို အနီးကပ်ကြည့်ခွင့်ရတဲ့ အခွင့်အရေးကမလွယ်။ ပြီးတော့ အလိုးခံမည့်သူက သူနဲ့လက်ပွန်းတတီးနေခဲ့ပြီး လှသောတောင့်သော သူသဘောကျနေသည့် မစန်းကြည် ဖြစ်နေတာ ကတော့ တဏှာစိတ်က ပို၍ထလာရတော့သည်။
“ အဲဒီညက…..တအားလိုးလို့ ကောင်းတယ်ကွာ…မင်းစောက်ဖုတ်ကြီးကို အားရပါးရ လိုးရအောင် အိမ်က ကောင်မကို မလိုးဘဲ စုထားလိုက်ရတာ….ဟင်း..” “ ကျမကလဲ အားရပါးရ ခံမလို့ဘဲ…. ဟိုအကောင် နိုးလာတော့ ဘယ်နှယ့်လုပ်မလဲ… ” “ အေး….ဟုတ်တယ်… ” “ ဒါပေမဲ့….တော်က…အဲဒီညက…ပြီးပါတယ်…..ကျမကသာ တိုးလို့တန်းလန်းကြီး ကျန်ရစ်ခဲ့တာ…ကျမဖြင့် တညလုံး အိပ်လို့ကိုမပျော်ဘူး….အဲဒါနဲ့….လက်နှစ်ချောင်း ထိုးထည့်ပြီး…အာသာပြေအောင် လုပ်လိုက်ရ တယ်……” “ အေးပါကွာ…..အဲဒီညက……အကြွေးဆပ်ချင်လို့…..မင်းကို ဒီနေ့ ချိန်းလိုက်တာပါ…” သံချောင်းက ပါးစပ်ကလဲပြော လက်ကလည်း ထဘီအောက်ကိုလျိုပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးကို နှိုက်နေပုံရသည်။ “ တော့်……မိန်းမက….ကျမနဲ့ဖြစ်နေတာ….မရိပ်မိဘူးလား…..” “ ဘယ်လို ရိပ်မိမှာလဲ…ဒီကောင်မက ငတုံးမဘဲဟာ……” ဖိုးတုတ် သံချောင်း၏မိန်းမ ‘ခင်နွဲ့’ ကိုပြေးမြင်ယောင်မိလိုက်သည်။ ခင်နွဲ့ဆိုတာကလည်း အသားလေးညိုတာက လွဲလို့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်က မစန်းကြည်နှင့် တန်းတူလှသည်။ “ စောက်ဖုတ်ထဲ မနှိုက်နဲ့တော်…..စောက်စေ့ကို နာနာလေးပွတ်ပေးစမ်းပါ….အဲ…အဲ…ဟုတ်ပီ….နာနာ… အမလေး….အား…ဟင်း…ဟင်း..ပွတ်……ပွတ်….ဟုတ်ပီ…..ရှီး….ကျွတ်…..ကျွတ်……..” သံချောင်းက မစန်းကြည်စကားအတိုင်း စောက်စေ့ကို ပွတ်ပေးလိုက်ပုံရသည်။ မစန်းကြည် တကိုယ်လုံး တွန့် လိမ်ကော့လန်နေပြီး တဆတ်ဆတ် လူးသွားသည်။ သံချောင်းက သူ့လက်တဖက်ဖြင့် ဖက်ထားသော မစန်းကြည်၏ ကိုယ်လုံးကြီးကို အောက်သို့လှဲသိပ်လိုက်ပြီး ဘေးစောင်းယှဉ်လျက် ပါးစပ်က နို့ကြီးနှစ်လုံးကို တလှည့်စီ စို့ပေးရင်း လက်က စောက်စေ့ပြူးပြူးကြီးကို ဆက်လက်၍ ပွတ်ပေးနေပါသည်။
“ အား….ဟင်း…..အမလေး…..အ…..အား…..ဟင်း…….ရှီး….အ…အား.. တအားကောင်းတာဘဲ…..ပွတ်….ပွတ်…..နာ….နာ..လေး….အစေ့လေးကို… လှိမ့်ပြီး…..ပွတ်ပေးစမ်းပါ……အမလေး……..” ထဘီကဖုံးထားသဖြင့် စောက်ဖုတ်ကြီးကို မမြင်ရသေးပါ။ သို့သော် ဒူးနှစ်ချောင်းထောင်ပြီး တကိုယ်လုံး တွန့်လိမ်ကော့ပြန်နေသည့်အတွက် ထဘီက ပေါင်ရင်းထိ လန်ပြီး လျှောကျသွားသည်။ မစန်းကြည်၏ ပေါင်တံဖွေးဖွေး တုတ်တုတ်ကြီးကို မြင်လိုက်ရတော့ ဖိုးတုတ် တကိုယ်လုံး ကြက်သီးမွှေးညှင်း တွေ တဖျန်းဖျန်းထပြီး ရင်တွေတဒိန်းဒိန်းခုန်ကာ အာခေါင်တွေ ခြောက်လာတော့သည်။ မစန်းကြည် မျက်နှာတခုလုံး ရှုံ့မဲ့နေပြီး ပါးစပ်မှ တကျွတ်ကျွတ် စုပ်သပ်နေပါသည်။ မစန်းကြည်၏ လက်တွေက သံချောင်း၏လီးကြီးကို ပုဆိုးပေါ်မှ စမ်း၍တင်းနေအောင် ဆုပ်ကိုင်ထားသည်။ “ အား……အား…….အမလေး…..လေး……အား……ရှီး…..လုပ်…လုပ်တော့… ရပြီ……အား….အင်း……” သည်တော့မှ သံချောင်းက လှဲအိပ်နေရာမှ ထထိုင်ကာ မစန်းကြည်၏ ပေါင်နှစ်လုံးကြားကို ဒူးထောက်၍ ဝင်လိုက်သည်။ ထို့နောက် သူ့ပုဆိုးကိုခေါင်းမှ လှန်၍ချွတ်လိုက်ပြီး မစန်းကြည်၏ ဒူးနှစ်လုံးကို ပင့်တင်ကာ ရင်ဘတ် ဆီသို့ ဖိကပ်လိုက်လေသည်။ သံချောင်း၏လီးကြီးက ခြောက်လက်မခန့်ရှည်သည်။ လချောင်းတခုလုံး အညိုရောင်သန်းနေပြီး ဒစ်ကြီးက တင်းပြောင်ပြဲအာ၍နေသည်။ ဖိုးတုတ်ကြည့်ရင်း သံချောင်း၏လီးနှင့် သူ့လီးကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နေမိသည်။ သူ့လီးက သံချောင်း၏လီးထက် အရှည်က လက်သုံးလုံးလောက်ပိုပြီး လုံးပတ်က နှစ်ဆလောက် ပိုကြီးသည်။ သူ့ကို ဖိုးတုတ်လို့ နာမည်ပေးထားတာဘဲ ကြည့်လေ။ အခု သူ့လီးက ပုဆိုးထဲတွင် ထောင်မတ်၍နေသည်။
သံချောင်းက မစန်းကြည်၏ ထဘီကို ခါးစပ်ထိရောက်အောင် ပင့်လှန်လိုက်သည့်အတွက် မို့အစ်တင်း ဖေါင်းနေသော ဆီးခုံဖွေးဖွေး ဝင်းဝင်းကြီးနှင့်စောက်မွှေးအုံမဲမဲကြီးကို မြင်လိုက်ရသည်။ စောက်ဖုတ်ကြီးက အောက်ပိုင်းဘက် ရောက်နေသည်မို့ မြင်ခွင့်မသာသေးပေ။ သံချောင်းက သူ့လီးကြီးကို လက်မှကိုင်ပြီး စောက်ဖုတ်ထဲ ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ လီးကြီးက လျှောကနဲ ဝင်သွားပုံရပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးက ဘယ်မျှကြီးပြီး ဘယ်လောက်ပြဲနေမလဲဟု ဖိုးတုတ် တွေးမိလိုက်သည်။ မစန်းကြည် မှာ သံချောင်းက သူမစောက်စေ့ကို ပွတ်ပေးထားသဖြင့် မစန်းကြည်မှာ တဟင်းဟင်း စိတ်တွေကြွနေသည်။ မိန်းမတွေအဖို့ ကာမကိစ္စတွင် စောက်စေ့၏ အရေးပါပုံကို ဖိုးတုတ် နဂိုကထဲကပင် သိထားပြီးဖြစ်သည်။ ခုလို မစန်းကြည်တယောက် သံချောင်းကို လင်ငယ်ထား၍ ပက်ပက်စက်စက်ကြီးဖြစ်နေသည်ကို ဖိုးတုတ်တွေ့လိုက်ရတော့ မစန်းကြည်အား ဖိုးတုတ် မထိရဲ မတို့ရဲလောက်အောင် ဖြစ်နေသည့်ကြားက အတားအဆီးကြီးက ကျိုးပျက်ပျောက်ကွယ် သွားခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်။ သံချောင်းက မစန်းကြည့်၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် လက်နှစ်ဖက်ကို ကျော်ခွထားလိုက်ပြီး ဆောင့်၍ ဆောင့်၍ လိုးပါတော့သည်။ “ ဖွတ်…….ဖွတ်……ပလွတ်……ဖွတ်……ဖွတ်……..” တဖြေးဖြေး ဆောင့်ချက်တွေက မြန်ဆန်သွက်လက်လာသည်။ မစန်းကြည်ကလည်း သံချောင်း၏ခါးကြီးကို တင်းနေအောင်ဖက်ထားပြီး သူမဖင်ဆုံထွားထွားကြီးကို ကြွကာ ကြွကာ ကော့၍ ကော့၍ ခံနေလေသည်။
“ ဖွတ်….ပလွတ်……ဗြစ်…..ဖွတ်…..ဇွတ်…….” မစန်းကြည်၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းက ဘေးသို့ဖြဲကားထားပြီး ဒူးနှစ်ချောင်းက အပေါ်သို့ထောင်ကာ ဆောင့်တိုင်း ဆောင့်တိုင်း ရမ်းခါနေပါသည်။ သံချောင်းက ခပ်သွက်သွက် ဆောင့်ပေးရင်း သူ့ကိုယ်လုံးကြီးကို မစန်းကြည်၏ ဗိုက်ပေါ် မှောက်ချလိုက်ပြီး နို့သီးဖျားလေးတွေကို ပါးစပ်ဖြင့် တပြွတ်ပြွတ်စုပ်၍ သွားနှင့် မနာကျင်အောင် ခပ်ဆတ်ဆတ် ကိုက်ပေးလိုက်လေသည်။ သည်အနေအထားအရ သံချောင်းက ရှေ့သို့အားပြုထားလေတော့ သူ့လီးက မစန်းကြည်၏ စောက်ခေါင်းထဲ တဆုံးမဝင်ဘဲ မထိတထိ ပွတ်ညှောင့်ပေးနေသလို ဖြစ်နေရကာ မစန်းကြည်မှာ အားမလို အားမရဖြင့် သူမ၏ ဖင်ဆုံကြီးကို အစွမ်းကုန် မြှောက်၍မျက်လုံးစုံမှိတ် အံကိုကြိတ်ကာ ကော့ကော့ပြီး ထိုးပေးနေသည်။ “ ဗြစ်….ပလွတ်….အင်း….ဟင်း…..ပလွတ်….ဖွတ်…..ကျွတ်…ကျွတ်…..” ကျန်းကျန်းမာမာ သန်သန်စွမ်းစွမ်း ကိုဘအေးလို ယောက်ျားရှိလျက်နှင့် ဒီလိုကမြင်းနေသည်မှာ မစန်းကြည် တော်တော်တဏှာကြီးကြောင်း ဖိုးတုတ် တွေးလိုက်မိသည်။ “ ဖွတ်…..ဖွတ်…..ပလွတ်…..ဗြစ်…..ဖွတ်….အား….အား….အီး..ရှီး..ကျွတ်…ကျွတ်……ကျွတ်…..ဆောင့်… နာ..နာ..ဆောင့်….အီး…..” မစန်းကြည် စိတ်တွေထလာပြီး အောက်မှနေ၍ အသကုန် ကော့၍ ကော့၍ ပင့်ပင့်ပြီး ပြန်ဆောင့်လေတော့ရာ သံချောင်းလည်း နို့စို့နေရာမှ ကိုယ့်ကိုပြန်မတ်လိုက်ပြီး အားရပါးရ ဆောင့်လိုးပါတော့သည်။ “ ဖွတ်…ဖွတ်…..ပလွတ်…..ဗြစ်…..အား…..အား….အမလေး….” သံချောင်း၏ ဆောင့်ချက်ကြောင့် တဲလေးမှာ တသိမ့်သိမ့် ဖြစ်နေရလေသည်။
“ ဖွတ်…ဖွတ်….ပလွတ်….ဇွတ်…..အမလေး….. အား….အား…..” အချက်ပေါင်း (၂၀) လောက်ဆောင့်ပြီးသောအခါ သံချေင်းတယောက် အားကနဲ အားကနဲ ပါးစပ်က အသံထွက်ရင်း မျက်နှာတခုလုံး ရှုံ့မဲ့၍ ဆတ်ကနဲဆတ်ကနဲ တွန့်တွန့်သွားပါသည်။ သံချောင်း ခါးကိုတင်းနေအောင်ဖက်ထားသော မစန်းကြည် လက်နှစ်ဖက်ကလည်း ပြေကျသွားတော့သည်။ သံချောင်းက မစန်းကြည်၏ နို့အုံကြီးပေါ်သို့ မျက်နှာအပ်ကာ မှောက်၍ မှိန်းနေပါသည်။ အတော်ကြာကြာမှိန်းနေပြီးမှ သံချောင်းက ကုန်းထလိုက်ပြီး သူ့လီးကြီး ကိုဆွဲနှုတ်လိုက်သည်။ လီးကြီးက ပျော့ပျော့ငိုက်ငိုက်ကြီး ဖြစ်နေသည်။ သံချောင်းက မစန်းကြည်ကို ပွေ့ထူလိုက်သည်။ “ ဘယ်နဲ့လဲ……ကျေနပ်တယ်မို့လား……” မစန်းကြည်က ခေါင်းငြိမ့်ပြရင်း သူ့နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဘော်လီအင်္ကျီကို ပြန်ဆွဲချ၍ ဖုံးလိုက်ပြီး အပေါ်အင်္ကျီကိုဝတ်ကာ ကြယ်သီးတွေ ပြန်တပ်လိုက်သည်။ သံချောင်းကလည်း သူ့ပုဆိုးကို ပြန်ဝတ်သည်။ မစန်းကြည်က ဖင်ပြောင်ကြီးနှင့် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လိုက်ပြီး ပေါင်နှစ်ဖက်ကားကာ ခါးမှထဘီ အောက်နားစကို ဆွဲ၍စောက်ပတ်ကို သုတ်သည်။ ဖိုးတုတ်ကြည့်ချင်နေသော မစန်းကြည်၏ စောက်ပတ်ကြီးကို တဲ့တဲ့ကြီးတွေ့လိုက်ရတော့ သူတို့လိုးတာ ကြည့်ပြီး တချိန်လုံး တောင်မတ်နေသည့် လီးကြီးက တဆတ်ဆတ် ဖြစ်သွားသည်။
စောက်ဖုတ်ကြီးက နဲတာကြီး မဟုတ်။ ဒီလိုစောက်ဖုတ်မျိုးမှ သူ့လီးနှင့်ကိုက်ညီမည်ဟု ဖိုးတုတ် တွေးလိုက်မိသည်။ စောက်ဖုတ်အုံကြီးက ဖြူဝင်းဖေါင်းမို့နေပြီး နှုတ်ခမ်းသား ထူထူကြီးတွေက အညိုရောင်သမ်းနေသည်။ မစန်းကြည်က စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ခုကိုဖြဲပြီး သုတ်သောအခါတွင်တော့ အတွင်းသားနုနုတွေက နီရဲနေပြီး စောက်ရည်တွေဖြင့် စိုရွှဲကာ အရောင်လက်နေသည်။ ထိပ်မှ ဇီးကင်းလောက်ရှိသော စောက်စေ့မှာ ထောင်နေသည်။ ဖိုးတုတ်ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့ဘဲ ပုဆိုးကိုအောင်မှမတင်ကာ တဆတ်ဆတ် တုန်နေသော သူ့လီးကို လက်ဖြင့်ကိုင်၍ ခပ်သွက်သွက်ကြီး ဂွင်းတိုက်ပစ်လိုက်တော့ ခဏအတွင်းမှာပင် လရေတွေပန်းထွက်ကုန်တော့သည်။ ထိုအချိန်မှာပင် စောက်ရည်များ သုတ်ပြီးတော့ မစန်းကြည်က ထဘီကို ခါးမှဖြေချ၍ ပြန်ဝတ်လိုက်သည်။ “ မနက်ဖြန် လာအုံးမလား….စန်းကြည်… ” “ ဟင့်အင်း…..သန်ဘက်ခါ ညကျမျ ခါတိုင်းလိုဘဲ ရှင်လာခဲ့…အိမ်ကကောင် မြို့တက်ပြီး ရေစုပ်စက် သွား ဝယ်မလို့……” “ ဒါဆို ဟန်ကျတာပေါ့….” “ သမီးလေးကိုလည်း အမေတို့အိမ်ကို ပို့ထားမယ်…..ဒါမှ တော်နဲ့ကျမ စိတ်ရှိတိုင်း ပျော်နိုင်မှာ….အဲ… တခုတော့ရှိတယ်… ရှင်… သန်းခေါင်ကျော်မှလာ… ဒီအချိန်ဆို ဖိုးတုတ်တို့ သားအမိလည်း အိပ်နေပြီ…..သိလား……” နားနှင့်ဆတ်ဆတ် ကြားလိုက်ရသော ဖိုးတုတ် ပြုံးလိုက်မိသည်။ ပြောပြီးသည်နှင့် သံချောင်းနဲ့ မစန်းကြည် တယောက်ကို တယောက် ပွေ့ဖက်နမ်းလိုက် ကြလေသည်။ ဖိုးတုတ်လည်း သံချောင်း၏ တဲဘေးမှ ခြေကိုဖွနင်းပြီး ထွက်လာခဲ့သည်။ မစန်းကြည် ကိုဘအေးကို ယူခဲ့တာက မိဘများသဘောတူ ပေးစား၍ ယူခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
အမှန်တော့ သံချောင်းက မစန်းကြည်၏ ရည်းစားဦးသာ ဖြစ်လေသည်။ ဒါကြောင့်လဲ ကိုဘအေးနှင့် လက်ထပ်ပြီးသည့်တိုင်အောင်မစန်းကြည်က သံချောင်းနှင့် တိတ်တိတ်ပုန်း တွေ့နေကြခြင်း ဖြစ်လေသည်။ “ အမရေ……အမ……” “ ဟဲ့….ဘာတုံး….ဖိုးတုတ်….” ညနေခင်း ရေချိုးကာ သနပ်ခါးလိမ်းနေသော မစန်းကြည်က အိမ်ရှေ့မှ ဖိုးတုတ်၏ အသံကြား၍ ပြန်ထူး လိုက်ရင်း အိမ်ရှေ့သို့ လှည့်ကြည့်လိုက်မိရာ အိမ်ပေါ်သို့တက်လာပြီး သူမထဘီရင်လျားဖြင့် သနပ်ခါးလိမ်းနေရာသို့ ရဲရဲတင်းတင်း ဖိုးတုတ်ရောက်လာသည် ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ မစန်းကြည် ထိုင်၍ထဘီရင်လျားဖြင့် သနပ်ခါးလိမ်း နေရာအနီးသို့ရောက်လျှင် ဖိုးတုတ်က ထိုင်ချလိုက်သည်။ ရဲတင်း၍ အချိုးပြောင်းနေသော ဖိုးတုတ်ကို မစန်းကြည်အံ့သြနေမိသည်။ “ ဘာ…ပြော…မလို့လဲ…..ဖိုးတုတ်…..” “ ကျနော်…..နွားနို့ သွားယူမလို့……” ပြောလဲပြော ဖိုးတုတ်၏ မျက်လုံးက ရေဆေးငါးကြီးလို ဖြူဖွေးလှပနေသော မစန်းကြည်ကို ပြောင်ပြောင် တင်းတင်း စားတော့ဝါးတော့မတတ် ကြည့်နေသည်။ “ ဒါများ…သွားယူပေါ့ဟယ်….နွားနို့နေ့တိုင်း သွားယူနေကျဘဲဟာ….” “ မဟုတ်ဘူး….အမရ……ဒီနေ့ ကိုသံချောင်းတို့ တဲဖက်ကို သွားလို့ရပြီလားလို့….မေးမလို့……” မစန်းကြည်၏ မျက်နှာရဲသွားသည်ကို ဖိုးတုတ် သေသေချာချာ အနီးကပ်တွေ့လိုက်ရသည်။
“ နင်….သွားချင်တဲ့ ဆီကသာ….သွားချေ…..” မချိုမချဉ်မျက်နှာနှင့် ဖိုးတုတ်က မစန်းကြည်ကို ကြည့်ပြီး ထရပ်လိုက်သည်။ “ ဒါဆိုလဲ သွားတော့မယ်ဗျာ……” ဖိုးတုတ် အိမ်ရှေ့ဘက်သို့ တလှမ်းချင်း လှမ်းထွက်ခဲ့သည်။ ဖိုးတုတ်၏ ထူးခြားသော ပုံစံနှင့် စကားတို့က သူမနှင့်သံချောင်းတို့ အကြောင်းများ သိသွားပြီလားဟု မစန်းကြည် တွေးမိလိုက်သည်။ အိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လိုရမယ်ရ တခုခုလုပ်ရမည်ဟု မစန်းကြည် တွေးလိုက်သည်။ “ ဖိုးတုတ်…..ခဏ…လာအုံး…..” ဖိုးတုတ် ပြန်လှည့်လာသည်။ အနားရောက်တော့ “ ထိုင်ပါအုံး ဟ….” ဖိုးတုတ် ထိုင်ချလိုက်သည်နှင့် မစန်းကြည်က စကားဆက်သည်။ “ နင်နဲ့ငါနဲ့က မောင်နှမတွေလိုနေခဲ့တာဆိုတော့ ငါမရှက်ပါဘူးဟာ….” ဖိုးတုတ်က ဘာလဲဟူသော အတွေးဖြင့် သူမကို ငေးကြည့်နေမိသည်။ “ တခြားမဟုတ်ပါဘူးဟာ……ဒီမှာ ငါ့နို့သီးကို ဘာကောင်ကိုက်သွားလဲ မသိဘူး…ကြည့်ပေးစမ်းပါအုံး……” ပြောလဲပြော မစန်းကြည်က ထဘီကို ခါးထိဖြည်ချလိုက်သည်။ ဆူဖြိုးလှသော နို့ကြီးနှစ်လုံးနှစ်လုံး ဝင်းကနဲ ထွက်ပေါ်လာသည်နှင့် ဖိုးတုတ်ရင်ထဲ ဒိန်းကနဲ ဖြစ်သွားသည်။ “ သေချာကြည့်စမ်းပါ……ဖိုးတုတ်ရ…..” “ ကြည့်…. ကြည့်နေပါတယ်….အမရ……” ဖိုးတုတ်အသံက တုန်နေသည်။ ပြီးတော့ လည်ချောင်းတွေကလည်း ခြောက်နေသည်။
“ ဘာတွေ့လဲ….ဟ…..” “ ဘာမှမတွေ့ဘူး….အမ….ကျွန်တော်မသိဘူး…အမေ့ကို ခေါ်ပြကြည့်ပါလား..” “ အော်….အေး……ဒါဆို…နင်သွားတော့….” ဖိုးတုတ် လေးလေးလံလံဖြင့် မတ်တပ်ထရပ်သည်။ “ အော်…….ဖိုးတုတ်…..” “ ဘာ…ဘာလဲ….အမ…..” မစန်းကြည်ဘက်သို့ ဖိုးတုတ်က သမင်လှည်ပြန် လှည့်ကြည့်လိုက်သည်။ “ ဟို….အိမ်ရှေ့က ဘီဒိုပေါ်မှာ ငါးရာတန် တရွက်ရှိတယ်… ယူသွားပြီး နင်သုံးချင်ရာသုံး…ငါမုန့်ဘိုးပေးတာ….” “ ဟုတ်ကဲ့…အမ…..” ဖိုးတုတ်အိမ်မှ ထွက်သွားတော့မှ မစန်းကြည် သက်ပြင်းချပြီး သနပ်ခါး ဆက်လိမ်းဖြစ်တော့သည်။ ဒီည သံချောင်းနှင့် ချိန်းထားသော ညဖြစ်၍ မစန်းကြည်တယောက် အရင်နေ့များနဲ့မတူ သနပ်ခါးကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးလိမ်းကာ အလှပြင်နေမိခြင်းသာ ဖြစ်ပါလေတော့သည်။ ဖိုးတုတ် အလာတုံးက ကြည့်တော့ သံချောင်းတို့တဲတွင် ဘယ်သူမှမရှိ။ အဖွားလေးတို့တဲမှ အပြန်ကျမှ တဲရှေ့တွင် သံချောင်း ထင်းဖြတ်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ဖိုးတုတ် လက်ထဲမှ နွားနို့ပုလင်းကို ကိုင်ကာ သံချောင်း၏ အနီး ထင်းတုံးတခု ပေါ်တွင် ထိုင်ချလိုက်သည်။ “ ဖိုးတုတ်… နွားနို့လာယူတာလား….” “ ဟုတ်တယ်…..ကိုသံချောင်းရာ…နေ့ရှိသရွေ့ ယူနေရတာဘဲ….” “ မစန်းကြည်တို့ လင်မယားက မင်းတို့သားအမိအပေါ် ကောင်းပါတယ်ကွာ…..” သံချောင်းက ထင်းတချောင်းကို သူ့ရှေ့သို့လှမ်းဆွဲရင်း ပြောလိုက်သည်။
“ အမှန်က ကျုပ် ဒီနေ့နွားနို့ လာယူစရာမလိုဘူးဗျ…. အကိုဘအေးက မြို့တက်မှာ” ပြောလဲပြော သံချောင်းမျက်နှာကို ဖိုးတုတ်ကလှမ်း၍ အကဲခတ်လိုက်သည်။ ဖိုးတုတ်၏စကားအဆုံး ထင်း ချောင်းကိုခုတ်ရန် ရွယ်ထားသော ဓားမကို သံချောင်းက ဆက်၍မခုတ်တော့ဘဲ ဘေးသို့ချလိုက်ကာ ဖိုးတုတ်မျက်နှာကို လှမ်းကြည့်သည်။ “ နို့…. ဘအေးက မြို့မတက်ဘူးလား…. မနက်ကဘဲ ပဲ့ဆိပ်ဆင်းသွားတာ ငါတွေ့လိုက်ပါတယ်….” “ အဲဒါပေါ့….သူလိုချင်တဲ့ပစ္စည်း အမျိုးအစားက ဈေးတက်နေလို့ ငွေမမှီဘူးဆိုပြီး ပြန်လာတယ်…စောစောကမှ ပြန်ရောက်လာတာ… လိုတဲ့ငွေ ထပ်ယူပြီး မနက်မိုးမလင်းမှီ ပြန်သွားမယ် ပြောတာဘဲဗျာ… ပဲ့ထောင်လေးတစ်စီးရှိတော့ သွားချင်တဲ့ အချိန်ထသွားလို့ ရတာပေါ့ဗျာ….” “ ဘအေး…ကမနက်ဖြန်ကျတော့…စက်ဝယ်ပြီး ချက်ချင်းပြန်လာမှာလား…” သံချောင်းက ကောင်ကာငင်ကာ အလောတကြီး မေးလိုက်သည်။ ပြုံးတော့မလို ဖြစ်သွားသော မျက်နှာအား ဖိုးတုတ်အမြန်ပြင်လိုက်ရသည်။ “ အဲဒါတော့ ကျနော်မသိဘူးဗျာ….ကဲ…သွားမယ်….. ဗျာ… မိုးချုပ်တော့မယ်….” ပြောလဲပြော ဖိုးတုတ်က ထ၍ပြန်ခဲ့သည်။ သူ့ကိုကျောပေးကာ ထွက်သွားသော ဖိုးတုတ်၏ ကျောပြင်ကို ကြည့်ရင်း သံချောင်းမှာ ‘တော်သေးတာပေါ့.’ ဟူသော အတွေးဖြင့် သက်ပြင်းချရင်း ကျန်ခဲ့လေတော့သည်။
သံချောင်းကို သန်းခေါင်ကျော်မှလာရန် ချိန်းထားပြီး ဖြစ်သဖြင့် ညဦးပိုင်း တရေးရအောင် အိပ်ထားမည်ဟုဆုံးဖြတ်ကာ မစန်းကြည် ကြိတ်မှိတ်၍ အိပ်သည်။ အိပ်လို့ကားမရ။ ဆုံကြရမည့်အရေး ကြုံလာတော့မည့် ကိစ္စကို မျှော်တွေး၍ စိတ်တွေထကာ အိပ်ယာပေါ် လူးလူးလှိမ့်လှိမ့် ဖြစ်နေရလေသည်။ မစန်းကြည်တယောက် မကြာခဏလည်း ပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲ လက်ထည့်ပြီး စောက်ပတ်ကြီးကို ပွတ်ပေးနေမိသည်။ သည်လိုနှင့် သန်းခေါင်ကြက်တွန်သံ ကြားလိုက်ရသည်။ မစန်းကြည် အိပ်ယာပေါ်မှ လူးလဲထလိုက်ပြီး ဆံပင်တွေကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ပြန်၍ ဖီးသင်လိုက်သည်။ အိမ်ထဲတွင်က ဘက်ထ္ထရီမီးလေး ထွန်းထားလိုက်သည်။ ထိုအချိန်မှာပင် “ ဒေါက်…ဒေါက်….ဒေါက်….ဒေါက်……” အိမ်နောက်ဖေးတံခါးကို ခေါက်သံ မစန်းကြည် ကြားလိုက်ရသည်။ ဗြုံးကနဲ ဝမ်းသာသွားပြီး ထိုင်ရာမှထရပ် လိုက်သော်လည်း နေရာမှ မရွှေ့ဖြစ်။ မစန်းကြည် စဉ်းစားသည်။ ခါတိုင်း သံချောင်းလာလျှင် သူမအိပ်ခန်းခေါင်းရင်းဘက်မှ နံရံကို တစ်ချက် နှစ်ချက်လောက် ခေါင်လိုက်သည်။ သူမက သိကြောင်း ချောင်းတချက်လောက် ဟက်လိုက်ပြီး အိမ်ရှေ့တံခါးကို သွားဖွင့်ပေးရသည်။ ခုတော့ ခေါင်းရင်းတံခါးကို မခေါင်ဘဲ အိမ်နောက်ဖေးတံခါးကို ခေါက်လာသည်။ မစန်းကြည် ထပ်၍ခေါင်းရှုပ်ခံမစဉ်းစားတော့ဘဲ နောက်ဖေးသို့လာကာ တံခါးကို ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီး စောစောထဲက စိတ်ထဲကလည်း ထနေပြီမို့ ဝင်လာသူကို ဆီး၍ ဖက်လိုက်သည့်အခါ ဝင်လာတဲ့သူကလည်း သူမကိုပြန်၍ ဖက်လိုက်သည်။ နောက်ဖေးဘက်တွင်က မီးအလင်းရောင်ကမရှိ။ ခြံရိပ်ကလည်း ရှိနေတော့ လူလုံးကွဲရုံလောက်သာ တယောက်နှင့်တယောက်က မြင်ရလေသည်။ နှစ်ယောက်သား ဖက်လိုက်ကြပြီးသည်နှင့် အပြန်အလှန် နမ်းလိုက်တော့ ထောင်းကနဲ ကန်ထလာသောလီး က မစန်းကြည်၏ ဗိုက်ကို လာထောက်သည်။
မစန်းကြည် ရင်ထဲဒိန်းကနဲ ဖြစ်သွားသည်။ နဲနဲနောနောလီးကြီးမဟုတ်။ ကိုသံချောင်း ကြားဖူးနားဝနှင့် ဘာတွေလုပ်လာလဲမသိ။ လီးက အရင်ကထက် နှစ်ပြန်လောက်ကြီး နေသည်။ လီးအကြောင်းစဉ်းစားမိပြီး လီးကလည်းဗိုက်ကိုလာကပ်နေတော့ စိတ်တွေက ပိုထလာကာ မစန်းကြည်တအားဖက်ပြီး ဝင်လာသူကို နမ်းလိုက်သည်။ ဒီမှာတင်……… “ အထဲသွားရအောင်…..အမရာ……” “ ဟင်…..ဟင်….နင်…..နင်….” လန့်သွားသော မစန်းကြည်က ဖက်ထားသည်ကို လွှတ်ပေးလိုက်မလိုလုပ်ပြီးမှ ဘာကို သတိရသွားသည်မသိ။ လက်ကို မလွှတ်ဘဲ ပြန်၍ဖက်ထားလိုက်သည်။ “ ဟုတ်တယ်…..အမ…..ကျွန်တော်……ဖိုးတုတ်….ဘဲ…” ဖိုးတုတ်ဆိုတာ သဲသဲကွဲကွဲ သိလိုက်ရတော့ ချိန်းထားသော သံချောင်းရောက်လာလျှင် ဒုက္ခဘဲဟု မစန်းကြည် တွေးလိုက်မိသည်။ ဒါပေမဲ့ ဖိုးတုတ်က သူ့စကားကို ဆက်၍ပြောလိုက်သည်။ “ ကိုသံချောင်းလာမှာ …. မဟုတ်ဘူး….အမ….” ဒါဘဲပြောပြီး မစန်းကြည်ကို အိမ်အတွင်းဖက်ကို ဆွဲခေါ်သည်။ မစန်းကြည် စိတ်တွေ ယောက်ယက်ခတ်ရင်း ဖိုးတုတ်ဆွဲခေါ်ရာသို့ လိုက်ပါခဲ့ရသည်။ အိမ်အတွင်းဖက် မီးအလင်းရောင်ထဲ ရောက်သည်နှင့် ဖိုးတုတ်က သူဆွဲထားသော မစန်းကြည်လက်ကို လွှတ်ပေးလိုက်သည်။
“ ဖိုးတုတ်…နင်…..နင်….ဒါ..ဒါ…ဘာလုပ်တာလဲ….” မစန်းကြည် မိန်းမသားပီပီ မူလိုက်သည်။ “ လုပ်မနေပါနဲ့အမရာ….အကြောင်းသိတွေဘဲ…. ဒီမှာကျွန်တော့်လဲ ကြည့်ပါအုံး…” ပြောလဲပြော ဖိုးတုတ်က သူ့ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်သည်။ “ ဟယ်…..နဲတာကြီး မဟုတ်ဘူး……” ဟုပြောကာ မစန်းကြည်က လီးကြီးကို လှမ်း၍ကိုင်လိုက်သည်။ မစန်းကြည် အရာအားလုံးကို မေ့၍ ဖိုးတုတ်၏ လီးပေါ်အာရုံရောက်သွားပြီး…… “ ကြည့်ပါအုံး…..နဲနဲနောနောမဟုတ်ဘူး…..ဖိုးတုတ်..ရယ်……” အံ့သြတကြီး ပြောရင်း လီးကြီးကို လိုက်၍ဆုပ်ပေးနေသည်။ “ နင်….နင်…..ကြီးတာတော့…အကြီးကြီးဘဲ…..ကြာရောကြာပါ့မလား….ဟင်…” တဖက်က လီးကိုဆုပ်ဆုပ်ပေးရင်း ကျန်လက်တဖက်က ဖိုးတုတ်၏ လက်မောင်းတဖက်ကို လှမ်းကိုင်၍ မေးလိုက်သည်။ “ ပထမတော့ ဘယ်ကြာမလဲ….နောက်တော့ကြာလာမှာပေါ့….” “ ကဲ….ဖိုးတုတ်….အိပ်ယာပေါ်လှဲပြီး…..ပက်လက်လှန်လိုက်……”ဖိုးတုတ်က မစန်းကြည် ပြောသည့်အတိုင်း အိပ်ယာထဲလှဲချလိုက်ပြီး ပက်လက်လှန်လိုက်တော့ လီးကြီးက သစ်ငုတ်တိုကြီးသဖွယ် ထောင်မတ်နေသည်။
ဒါကြီးကို စိုက်ကြည့်နေရင်းက မစန်းကြည် ကိုယ်ပေါ်မှ အဝတ်အစားတွေကို အကုန်လုံးချွတ် ပစ်လိုက်လေသည်။ ပြီးတော့ မတ်တပ်ရပ်လျှက်မှပင် လှဲနေသော ဖိုးတုတ်ကို ခွပြီးရပ်လိုက်ရာက တဖြေးဖြေး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ချလိုက်သည်။ လီးထိပ်နှင့် စောက်ပတ် ဝတေ့မိသည်နှင့် မစန်းကြည်က အားနှင့်ဖိ၍ ထပ်ပြီးထိုင်ချလိုက်တော့ လီးကြီးက တထစ်ထစ်နှင့် ဝင်သွားပြီး မစန်းကြည်၏ မျက်နှာက ရှုံကနဲ ရှုံကနဲ မဲ့မဲ့သွားသည်။ ပြီးတော့လဲ ထိုင်ချနေသော သူမ၏ ပေါင်နှစ်ဖက်ကလည်း တဖြေးဖြေး ကားကားပေးလာသည်။ နောက်ဆုံး လီးတဆုံး ဝင်သွားချိန်တွင်တော့ မစန်းကြည် တကိုယ်လုံး ချွေးတွေပြန်နေပြီး တဆတ်ဆတ် တုန်တက်နေသည်။ မစန်းကြည်အံကို ကြိတ်၍ ဖင်ကိုကြွ ပြီး ဆောင့်လိုးပေးသည်။ ဖိုးတုတ်က သူကိုင်ဖူးချင်နေသော မစန်းကြည်၏ဖင်ကြီး တွေကို လက်နှစ်ဖက်နှင့်စုံကိုင်၍ ညှစ်နေသည်။ “ ဖွတ်….ပလွတ်……ဖွတ်….ဖွတ်…..ဟင်း….ဟင်း…..ဖွတ်….ဖွတ်……” မစန်းကြည်မှာ စိတ်ရှိတိုင်း သွက်သွက်ကြီး ဆောင့်လိုက်ချင်ပေမဲ့ လီးကြီးက မဆန့်မပြဲကြီး ဖြစ်လေတော့ မသက်သာလှပေ။ “ ဆောင့်ပေးပါ အမရာ…..ကျွန်တော် ထွက်တော့မယ်……” နောက်တချီမှဘဲ အေးအေးဆေးဆေး ခံတော့မည်ဟူသော အတွေးဖြင့် မစန်းကြည် မျက်လုံးကိုမှိတ် အံကို ကြိတ်ပြီး သွက်သွက်လေး ဖင်ကြီးကို ကြွကြွပြီး ဆောင့်ပေးလိုက် တော့ရာ တခဏအတွင်းမှာပင် ဖိုးတုတ်တယောက် လရေတွေ ပန်းထွက်ကုန်ပါ လေတော့သည်…….။ပြီး။